पर्यटनमन्त्रीका कारण प्लेन उडान ढिलो भएपछि यात्रु आक्रोशित
पर्यटनमन्त्रीका कारण प्लेन उडान ढिलो भएपछि यात्रु आक्रोशित पारस समर्थकको नियत बुझेको मन्त्रीको प्रतिक्रिया
नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २९, २०७६, ०८:१९
काठमाडौं- पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईका कारण शनिबार बुद्ध एयरको उडान ढिलो भएपछि यात्रुहरुले विमानभित्रै उनीविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्।
मन्त्री भट्टराई कैलालीको सतीघाटमा आयोजना भएको डल्फिन महोत्सवको उद्घान गरेर फर्किंदा उडान ढिलो भएको थियो।
आक्रोशित यात्रुले उनलाई कुर्ने क्रममा बुद्ध एयरले राति एक घण्टा ढिला गरेको भन्दै यात्रुहरु आक्रोशित भएका थिए।
उनीहरुले एक घण्टासम्म प्लेन रोकेर मोजमस्तीमा हुनुहुन्थ्यो? भन्दै मन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। उनीहरुले समयको ख्याल राख्नुपर्ने भन्दै संविधानको कुन सेक्सनमा मन्त्रीले प्लेन रोक्ने लेखेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले पञ्चायतकालमा पनि यस्तो नहुने बताएका थिए। तर, भिडियोमा मन्त्री भट्टराई भने मौन देखिन्छन्।
यता मन्त्री भट्टराईले भने काठमाडौं फर्किनै पर्ने दबाबका कारण आफूले बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेको र सोही कारणले ढिला भएको बताएका छन्। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा आफ्नो टिमको बोर्डिङ भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘भोलि प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमाडौं फर्कनैपर्ने दबाबमा म थिएँ’, उनले लेखेका छन्।
त्यस्तै, भट्टराईले आक्रोश व्यक्तहरुलाई पूर्व युवराज पारससँग पनि जोडेका छन्। ‘नेपालगंज विमानस्थलमा ३/ ४ जना व्यक्तिहरु आक्रमक शैलीमा मेरा विरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो’, उनले लेखेका छन्, ‘एकजनाले पारसका विरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरवारमा बुझाएर तैंले हामीलाई कति दु:ख दिएको छस्? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र? सम्म भने। त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले।‘
उनले सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
अजोड इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिकोत्वसमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न